Dadka Kenyanka aan haysanin E-Passports oo aan heli doonin Dal-ku-galka Mareykanka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dadka Kenyanka aan haysanin E-Passports oo aan heli doonin Dal-ku-galka Mareykanka
By Radio Dalsan Reporter	 On May 1, 2019
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inaysan wax Fiiso ah siin doonin ddaka Kenyaanka ee haysta Baasaboorka nooca duug ah, sidaa waxaa lagu sheegay hadal-qoraal oo ka soo baxay Safaaradda Maraykanka ee magaalladda Nairobi.
Tallabadaasi ayaa ah wareeg kale oo ay dadka Kenyanka ugu tartami doonaan si ay ku helaan Baasaboorada Electonic Passports ama E-passports.
Safaaraddu waxay sheegtay in dadka haysta E-passports o okeliya loo aqoonsan doono kuwa la siinayo Fiisaha dal-ku-galka Maraykanka, waxayna tani ka dhigaysaa in dalka Maraykanka yahay dalka ugu weyn dalalka Reer Galbeed ee codsada Nooc cusub ee Dukumentiyadda lagu socdaalo ee Kenyan Travel documents.
“Waxaan awoodnaa oo keliya inaan Fiisaha Maraykanka ku dhufanao Baasaboorka cusub. Waad ku dhigan kartaa Ballan Baasaboorkaaga haatan, balse waxaad u baahan yahay inay hesho E-passport, ka hor waxaan awoodnaa inaan ku siino Fiisaha” ayuu yiri Afhayeen u hadlay Safaaradda Maraykanka ee magaalladda Nairobi .
Waxa uu intaasi sii raaciyey in dadka Fiisaha Maraykanka loo saaray Baasaboorka duug inaan loo oggolaan doonin inay galaan Maraykanka, ilaa ay ka soo qaataan Baasaboorka E-passports.
Tallaabadda Safaaradda Maraykanka ku adkeysay qaabka dadka Kenyanka u helaan Fiisaha, ayaa timis, iyadoo Saraakiisha Dowladda Kenya, gaar ahaan Madaxa Adeegga Guud, Joseph Kinyua oo ka mamnuucay socdaalka Saraakiisha aan weli helin Baasaboorka nooca cusub ee E-passports.
Isbuucii la soo dhaafay, Xoghayaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Kenya, Macharia Kamau waxa uu sheegay inuusan Xafiiskiisa codsiga Fiisaha ku taageeri doonin Saraakiisha Sarsare ee Dowladda ee aan haysanin E-passport.
Baasaboorka nooca Elektoroonikada ee Kenya waxaa la bilaabay sannadkii 2017-kii, balse waxa uu si buuxda u dhaqan geli doonaa bisha August 31-da ee sannadkan, taasi oo oggolaanaysa in laga gudbo kii hore.
Laakiin, bishii December ee sannadkii hore, Madaxweyne-ku-xigeenka Kenya, William Ruto waxa uu muddada kama dambaysta ee Kala-guurka Baasaboorkii hore iyo kan cusub noqon doonto sannadka 2020-ka, si fursad loo siiyo inay Kenyan badan codsadaan Baasaboorka E-Passport.
Bishii Janaayo ee sannadkan Baasaboorka cusub ee Kenya waxaa la sheegay inay heleen 40,000 oo qof, balse, waxaa weli lagu safri karaa oo keliya waa Baasaboorkii hore.
Qurbo-joogta dalkaasi waxay ka cabanayaan helitaanka Baasaboorka cusub, waxayna ku khasban yihiin inay ku soo laabtaan Kenya, si ay safaf dheer u galaan si ay u dalbadaan Baasaboorka cusub.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkaasi waxay horey u sheegtay inay in Xarumo laga bixiyo Baasaboorada cusub laga furi doono magaallooyinka London (UK), Paris (Faransiiska), Washington (Maraykanka), Pretoria (South Africa), Dubai (Imaaraadka Carabta), Berlin (Jarmalka).